Xiriirada qalabka Android badbaadi kara in laba meel. Mid ka mid ah waa kaadhka xusuusta telefoonka, ka kalena waa kaar SIM. Lacag xiriirada in faa'iidooyinka kaarka SIM aad ka badan in kaadhka xusuusta telefoonka, gaar ahaan marka aad hesho casriga cusub Android. Si aad nuqul ka xiriirada in kaarka SIM, waxaad isku dayi kartaa Wonderhsare MobileGo for Android . Waa tababare sahlan in la isticmaalo Android, awood siinta in aad nuqul ka xiriirada qaab .vcf ka computer si SIM card. Ka sokow, aad awoodo inuu u dhaqaaqo xiriirada ka kaadhka xusuusta phone Android inay SIM.
Download Tababaraha this inuu u dhaqaaqo xiriirada in kaarka SIM.
Halkan, waxaad ka hubin kartaa qalabka Android ay taageerayaan iyo shuruudaha nidaamka ku saabsan Wobdershare MobileGo for Android.
Sida loo nuqul ka xiriirada si SIM card
Qaybta soo socda waa tallaabooyinka fudud ee dayanayaan in SIM card on Android xiriirada ka kombiyuutarka iyo ka kaadhka xusuusta phone Android. Diyaar ma tahay? 'Is Halkaan hoose ka bilaabay.
Tallaabada 1. Ku rakib oo ay maamulaan Tababaraha this Android
Bilowga, rakibi oo ay maamulaan Wondershare MobileGo for Android on your computer. Connect qalab Android aad la kombiyuutarka via WiFi ama via cable USB Android. Ka dib markii lagu ogaan karo qalabka Android aad, waxaad ka arki kartaa macluumaadka waxaa ka khaanadda bidix.
Tallaabada 2. xiriirada Kobigareynta in SIM card
Raadi "Xiriirada" tab khaanadda bidix. In "Xiriirada" category, waxaad ka arki kartaa meesha ay xiriir waxaa la badbaadiyey. Si aad nuqul ka xiriirada in kaarka SIM, guji group SIM ah. Dhammaan xiriirada badbaadiyey ee SIM ku muujisan yihiin xaq.
Si aad nuqul ka xiriirada qaab VCF ka computer in aad kaarka Android SIM, waa in aad ku dhufo "Import / Dhoofinta"> "contacts Import ka computer". In liiska jiido-hoos, doortaan "ka file vCard". Dul meesha files vCard waxaa lagu badbaadiyey. Iyaga soo dhoofsadaan.
Tababaraha Tani Android sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad u guurto xiriirada card in SIM card xasuusta telefoonka. Riix group Phone ku hoos "Xiriirada" geed buugga. Dooro xiriirrada in aad rabto in aad u guurto. Samee click midig. Marka markaas menu jiid-hoos u soo booda, doortaan "Group" oo group SIM ah. Markaas ka heli kartaa koox yar group SIM ka yar iyo badbaadin xiriir ah. Haddii xiriiro badan oo nuqul ee group SIM, iyaga oo aad si deg deg ah ku milmaan kartaa adigoo gujinaya "De-nuqul".
Marka aad salaadda dhamaysatona dhaqaaqin xiriirada in kaarka SIM, waxaad tagi kartaa dib group telefoonka iyo tirtirto xiriirrada in aad guurtay.
Video ayaa idin Toosiya sida ay u guuraan xiriirada si SIM kaar taleefan Android
Taasi waa dhan oo ku saabsan dayanayaan in SIM card qalabka Android xiriiro. Waa maxay sababta aan kala soo bixi Tababaraha this Android oo ay leeyihiin isku day ah oo adiga kuu gaar ah?
> Resource > Transfer > Sida loo Copy Xiriirada in SIM Card on Device Android